Isitudiyo seFalls Park
Wamkelekile kwiStudio ngeFalls Park. Le yindlu yesitudiyo elungele usapho enomnyango owahlukileyo. Ukuhamba umgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela ezininzi ezilungileyo kunye nomngxuma wokusela walapha ekhaya (Isitayile seWine), iFalls Park, iindlela zokuhamba kunye nomkhondo wokubaleka. Ifakwe kwimizuzu eli-10 ukusuka kwi-I-69, kunye nemizuzu engama-20 kuMantla e-Indianapolis. yekhasino Harrah kaThixo 15 imizuzu North pa I-69. Isitudiyo sineshawa/ibhafu, ibhedi yokumkanikazi e-1, i-futon epheleleyo, umatrasi we-queen weblowup kunye nekhitshi.
Indawo ebanzi ye studio ngaphezulu kwegaraji evaliweyo. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, itoaster, isitovu kunye nomenzi wekofu kunye nokutya okulula. Kukho imidlalo yebhodi edlalwa kuyo yonke iminyaka.
4.97 ·Izimvo eziyi-152
I-Falls Park yindawo entle yokuthatha uhambo okanye ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela ezijikajikayo kwindawo yokugcina imithi. Kukho izikhululo zokwabelana ngebhayisekile ezibekwe kuyo yonke idolophu apho unokufumana ibhayisekile onokuthi uyisebenzise imini ukukhwela kuyo yonke idolophu yethu encinci epholileyo. Iivenkile zamandulo kunye neevenkile zibekwe edolophini kwaye ngaphakathi komgama wokuhamba.
Ndifumaneka ngamaxesha amaninzi kwaye kuphela umbhalo kude, ukuba kuyimfuneko. Kungenjalo, ubumfihlo bakho buhlonitshiwe.